Chii chaunoshanyira muVeracruz, Mexico | Kufamba Nhau
Chii chaunoshanyira muVeracruz, Mexico
Susana Garcia | | America, Mekisiko
La Veracruz guta Iyo inonyanya kukosha mudunhu reVeracruz de Ignacio de la Llave. Guta iro zvakare rakakosha maererano nekutengeserana, sezvo iine imwe yezvakakosha zvekutengesa maritime emahombekombe kuMexico. Chiteshi icho zvakare chiri chekaresa, sezvo tiri kutaura nezveguta rakavambwa naHernán Cortés muzana ramakore rechi XNUMX.
Nhasi, guta reVeracruz rasara kiyi mukutengesa, asi zvakare iguta rinobudirira mukushanya. Nzvimbo ine simba ine nzvimbo huru yemahombekombe ine nzvimbo yemahombekombe uye zvakare guta rinonakidza patine zvakawanda zvekuita. Cherekedza zvese zvaunogona kuona muguta reMexico reVeracruz.
1 Svika pakuziva Veracruz
2 San Juan yeruya
3 wakisi Museum
5 Bastion yeSantiago
6 Veracruz's aquarium
7 Iyo Malecón uye Zócalo
8 Muromo weRwizi
Svika pakuziva Veracruz
Guta reVeracruz rinozivikanwawo se Umhare Veracruz, guta rizere nenyaya dzekutaura. Mariri, guta rakatarisana nekupokana kwekupedzisira kwevaSpanish munhare yeSan Juan de Ulúa muna 1825, asi vakatarisanawo nevaFrance muHondo yeCakes neNorth America. Guta rinozivikanwa nekupokana kwaro, nezvenzvimbo dzaro dzenhoroondo uye nekukosha kwezvekutengeserana uko chiteshi chayo chinoramba chiine. Iri makiromita mazana mana kubva kuMexico City, pamhenderekedzo yeGulf yeMexico.
San Juan yeruya
Kana paine nzvimbo yenhoroondo inofanirwa kushanyirwa muguta reVeracruz, ndiyo nhare yeSan Juan de Ulúa. Nhare iyo yaishanda sechiteshi chengarava, sekuchengetwa kwesimbi dzinokosha dzaifanira kutumirwa kuSpain uye zvakare sejeri. Kana iwe uchizoshanya, zvakanaka kuti ubhadhare gwaro kuti utiudze nezve kona imwe neimwe yenhare nenhoroondo yayo, nekuti nenzira iyi kushanya kunenge kuchinyanya kunakidza. Mairi unogona kuona yaive imba yegavhuna, kwaigara Benito Juárez, asi iwe unogona zvakare kuona masero anotonhora uye akanyorova evasungwa kana Rusvingo rweArgollas, pakamira ngarava.
Imwe yekushanya kunonakidza kuguta reVeracruz ndeye wakisi Museum. Ino miziyamu iri padyo neAquarium, saka tinogona kunakidzwa masikati ezvekuvaraidza tichishanyira nzvimbo mbiri idzi. Mukati tinogona kuona makamuri akasiyana ane akasiyana mavara, kubva kune vaimbi kusvika kune vatambi. Tinogona kutora mifananidzo ine mavara kubva kuFrankenstein kuenda kuna Elvis Presley.
El Naval Museum yeVeracruz Yakave yakavhurwa kubvira 1897, uye zvine musoro kuti mune rakakosha guta rechiteshi vane mamuseum inoenderana nezvose zvegungwa. Mune ino miziyamu huru tinogona kuona chivanze chakaisvonaka, chine mepu yepasi pasi, asi isu tinofanirwa zvakare kushanyira 26 emakamuri ekuratidzira anogara aine zviwanikwa zvekuona. Tichakwanisa kutora nzendo kuburikidza nenhoroondo yekufamba uye kudzidza nezve yazvino navy uye shanduko yezvikepe muMexico.
Iyi nzvimbo inozivikanwawo se Pfuti Bulwark. Icho chivakwa chemauto chezana ramakore rechiXNUMX icho chaive nedzimwe nzvimbo zhinji dzekuchengetedza guta. Nhasi kwasara imwe chete, uye ndiyo inogona kushanyirwa, kuti udzidze zvakawanda nezvenhoroondo yekudzivirira yeguta inozivikanwa seHeroica. Mukati payo parizvino inoshandiswa semuseum yekuchengeta Fisherman's Jewels, pre-Hispanic zvishongo zvemutengo wakakura.
Iyo Veracruz aquarium inokwezva kwazvo kune vashanyi, nekuti ndiyo inonyanya kukosha muMexico. Iyo ine mazana maviri nemakumi mashanu emarudzi, uye iri muPlayon de Hornos uye iyo 80% inzvimbo dzakasikwa. Ino inzvimbo yakanaka yekushanyira nemhuri, nekuti nekuwedzera kune varaidzo, vana nevakuru vanozokwanisa kudzidza zvakawanda nezve ecosystems uye marudzi eiyo aquarium. Imwe nzvimbo iyo munhu wese waanoda kushanyira ndeye Ocean Fish Tank, mugero waunogona kuona mhando dzeGulf yeMexico dzakanyatso nyatso nyorwa nharaunda.
Iyo Malecón uye Zócalo
Kune nzvimbo mbiri muguta reVeracruz dzinoshanya kwazvo, dzakanakira kuvaraidza. Kune rimwe divi kune Malecón, chiteshi chengarava uko, mukuwedzera pakuona zvikepe zvakamiswa, unogona kunakirwa nechikafu chemudunhu mumaresitorendi ari munharaunda kana kutenga chimwe chinhu chakajairika. Zócalo ndiyo imwe nzvimbo yaunofanirwa kupfuura, sezvo iri iyo Plaza Meya weguta. Nzvimbo yemusangano uko kuMuzinda weMuzinda nekedhedral iri.
Muromo weRwizi Iri iguta riri padyo nepakati peVeracruz. Kana isu tichida kupedza zuva rakanyarara pamabhichi ari munzvimbo uye nekure kure neguta, saka tinofanirwa kuenda kuBoca del Río. Mocambo Beach ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa, asi kune vamwe vazhinji vanakirwe nezuva rekushambidza nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » Chii chaunoshanyira muVeracruz, Mexico
5 zvinokwezva muKiev
Tourism muTel Aviv